Isisombululo se-Silver ion antibacterial
Indawo yaseTshayina (iarhente yokubulala iintsholongwane)
Indawo yaseTshayina (iarhente ye-anti-hydrolysis)
Yintoni ilaphu elwa i-antibacterial non-ephothiweyo?
Ubhubhane lowe-2020 aluqhelisanga kuphela uluntu ngezinto ezingalukwanga, kodwa luye lwachukumisa uluntu ngesicelo kunye nokusebenza kwemaski. Ngapha koko, amalaphu angalukwanga aqhelekileyo zizinto zonyango nezokukhusela impilo, kwaye zinemisebenzi ebalulekileyo kwimaski, iimpahla zokhuselo, ...
Ukuxela: Ziveliswa njani izinto zokulwa ne-antibacterial?
Emva kobhubhane, ulwazi lomntu wonke lwee-antimicrobials lukhule ngokubanzi. Imveliso ye-antibacterial kungekudala yavela kwicandelo lombono loluntu. Isiseko seemveliso zokulwa neentsholongwane zilele kwizixhobo zokulwa neentsholongwane! Ke iveliswa njani into yokubola? Langyi New Mate ...
Iimeko zefowuni yokubulala iintsholongwane -ukusetyenziswa okuthandwayo kweplastiki yokulwa neentsholongwane
Ubomi bethu bemihla ngemihla busondele kakhulu kwiifowuni eziphathwayo. Abantu baya ngokuxhomekeka ngakumbi kwiifowuni eziphathwayo. Iibhaktheriya ezikwiifowuni eziphathwayo azihoywa ngokulula ngabantu abaninzi. Ngokophando, iipesenti ezingama-92 zeefowuni eziphathwayo kunye ne-82% yabanini baphethe iibhaktheriya ezandleni. Phakathi kwabo, iipesenti ezingama-25 ze-mobi ...
Iindlela ezintlanu zokulungiselela iiplastikhi zokulwa neentsholongwane
Ngophuhliso olukhawulezileyo loqoqosho kunye nokuphucuka okuqhubekayo kwemigangatho yokuphila kwabantu, abantu bahlawula ngakumbi nangakumbi kwindawo yabo yokuhlala enempilo, esempilweni nekhuselekileyo. Nangona kunjalo, kuhlala kukho inani elikhulu leebhaktiriya, ukungunda kunye neentsholongwane kwizinto ...
Ityala leNkonzo | Sombulula ingxaki ye-PET monofilament hydrolysis
Inkcazo yengxaki filter Isihluzi sokomisa esisetyenziswe kwishishini lephepha yi-PET monofilament. Isetyenziswa kubushushu obuphezulu nakwindawo enomswakama ixesha elide. Isihluzi se-PET sithambekele ekuphenduleni kwe-hydrolysis. Ukongeza i-arhente ye-anti-hydrolysis yeHyMax® kwi-PET monofilament inokuyandisa inkonzo ...
Yintoni ifayibha ye-anti-antibacterial fiber?
Imicu ye-antibacterial eyenziweyo eyongeziweyo kunye ne-ion yentsimbi ye-antibacterial agents ikhule ngokukhawuleza kule minyaka idlulileyo. Inempawu zokhuselo oluphezulu kwaye akukho ukumelana neziyobisi, ngakumbi ubushushu bayo obugqwesileyo kunye nozinzo lweekhemikhali, kwaye isetyenziswe ngokubanzi kwifibre nakwezinye iinkalo.
Ukuvelisa njani ilaphu elwa i-antimicrobial?
Indwangu yesilivere ye-antimicrobial luhlobo olutsha lwefayibha esebenzayo eneempawu zokulwa neentsholongwane. Kukho iindlela ezimbini zokuvelisa isilivere ye-antimicrobial fabric. Enye indlela kukongeza i-ion yesilivere ye-arhente ye-antibacterial kumphezulu welaphu, kwaye enye indlela kukuyongeza ...
Abadala babesisebenzisa njani isilivere kunye nobhedu ukukhusela ibhaktheriya?
Kumaxesha amandulo, ukuqonda kwabantu ngococeko lokusingqongileyo kwakubuthathaka, kunye nokukwazi kwabo ukuthintela nokuchonga izifo zaziphantsi kakhulu. Izifo ezahlukahlukeneyo ezibangelwa kukosuleleka ziintsholongwane, ezinjengekholera, isifo sephepha nesifo segazi. Abantu ngelo xesha babengazi ukuba ba ...
Ukuphindaphindeka kwendyikitya yokufa, itekhnoloji yesilivere ye-Langyi yesilivere ye-antibacterial emnyama ikhusela ukhuselo lwemaski
Kutshanje, ubhubhane wesithsaba omtsha ubonakalise imeko yokuphindaphindeka e-China. Njengokuba oorhulumente basekhaya baqala ukomeleza ukuthintela kunye nokulawula ubhubhane, abantu bahlaziye ingqalelo yabo kukhuseleko lwabo. Ukunxiba iimaski lolona khuseleko lusisiseko xa uphuma. Iimaski ziye zaba ...
Kutheni le nto ion yesilivere inesiphumo esingapheliyo sokulwa neentsholongwane?
Xa ii-athomu zesilivere zilahleka enye okanye ngaphezulu kwee-elektron, ziba zii-ioni zesilivere. Iion zesilivere ngokubanzi zineendawo ezintathu ze-valence: Ag +, Ag2 + kunye no-Ag3 +. Iion zesilivere zineempawu ezomeleleyo ze-oxidizing kwaye zazisetyenziswa njengamayeza, njengoko kubhalwe kwi-pharmacopoeia yanamhlanje. Kukho amachiza amane ane-ions zesilivere ...
Isisombululo se-anti-hydrolysis yePolyester (PET PBT)
I-Polyurethane luhlobo lwezinto zepolymer ezineempawu ezizodwa. Idibanisa ukusebenza kwezixhobo ezahlukeneyo ezivela kwiiplastikhi, i-elastomers ukuya kwipeyinti, njengoluhlu olubanzi lobunzima, amandla aphezulu, ukunxiba ukunganyamezeli, ukufakwa kokungcangcazela okuhle, ukumelana nemitha, kunye nomoya ...
Umsebenzi we-anti-hydrolysis agent
Ukufuma kuchaphazela iipropathi ezahlukeneyo zeepolymers. I-silica gel, i-silica gel, okanye i-isocyanate iya kuphendula ngamanzi ngokukhawuleza. Ke ngoko, ukongeza isikhuseli sokufuma (Ukufuma Scavenger) ngexesha lokugcina ukugcina uzinzo lwezixhobo ezingafunekiyo ziyimfuneko. Iipolima ezilukhuni nezibunjiweyo, ...
Idilesi: Inombolo 1 Bldg., No. 188 Yonghang Rd., Songjiang Dist., Shanghai, 201699, PRC
Umnxeba: +86 021 6779 9029
Isilivere ye-Ion yeAntibacterial Agent, Ukongezwa kwintsholongwane yentsholongwane, Ukongezwa kweHydrolysis eyongezelelweyo, Antibacterial Masterbatch, Ummeli we-Antimicrobial Agent, Intambo ye-Antibacterial,
Isicelo seSampula saSimahla